Waxaa lagu naaneysaa ‘TAYO’, muxuu ku baxsanayaa maadaama uu GAABAN yahay,?, halkuu ka galayaa SHAXDA Arsenal?….(Wax kasta oo aad uga baahan tahay saxiixa cusub ee Gunners Takuma Asano) – Gool FM
(London) 03 Luulyo 2016. Arsenal ayaa goor dhaweyd xaqiijisay inay heshiis la gaartay weeraryahanka reer Japan ee Takuma Asano inkastoo aysan shaacin qiimaha iyo inta sano uu kooxda la joogi doono, sidoo kale weli ma uu marin tijaabada caafimaad kamana uu gudbin shuruudihii kale ee kooxda.
Haddaba aqriste waxaan halkan kugu heynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay Asano oo lagu wado inuu noqdo saxiixa labaad ee Arsene Wenger kaddib Granit Xhaka.
Halkuu ku dhashay, intuuse ka soo bilaabay ciyaaraha?.
Wuxuu ku dhashay Komono ee dalka Japan, waa 21-jir ka mid ah da’yarta ugu fiican dalkiisa, wuxuu ku ciyaaraa lugta midig, dhiririkiisu waa 1.71-m.
Wuxuu noqday laacib caan ka ah gudaha dalkiisa kaddib markii uu ku biiray Iskuulka sare ee Yokkaichi Chuo Kogyo, waa machad ay si wayn u tixgaliyaan xiddigaha kubbada cagta ee dalka Japan, 2010-kii wuxuu durba noqday gool dhaliyaha ugu sarreeya ee Iskuulkaasi.
Waxay guulihiisa ku hogaamiyeen inuu u dhaqaaqo kooxdiisa iminka ee Sanfrecce Hiroshima ee uu kula guuleystay labo horyaal, saddex jeer Japanese Super Cup.
Wuxuu kaloo ku guuleystay sanadkii la soo dhaafay laacibka ugu fiican horyaalka dalka Japan.
Muxuu ku baxsanayaa maadaama uusan joog dheer iyo xoog badan qabin?
Maadaama uu Premier League yahay horyaal xoog iyo quwad ku dhisan isla markaana uusan Asano qabin waxyaabaha uu dalbayo horyaalka Ingiriiska ayuu ku baxsanayaa Orodkiisa dheer iyo karaar qaadashadiisa aan innaba caadiga ahayn.
Waxaa lagu naaneysaa: Tayo, malaha ma jirto naaneys ka wacan oo qof loogu yeeri lahaa, oo waxaa loogu yeeraa dalkiisa “Jaguar” oo waa xawayaan dheereeya oo sida Shabeelka u eg, waxaana keentay in loogu yeero tayadiisa dhanka orodka oo aadka u sarreysa oo wuxuu ku ordaa 50 mitir 5.9-ilbiriqsi, waxaana xusid mudan in wiilka dheereeya ee Arsenal Theo Walcott uu 40-mitir ku cararo 4.42-ilbiriqsi.
Wuxuu u soo ciyaaray xulka da’oodu ka yartahay 23-jirada ee Japan sanadkan wuxuuna kula guuleystay koobka Aasiya.
Xulka Japan ayuu u saftay 4-kulan wuxuuna u dhaliyay hal gool. Goolka uu xulkiisa u dhaliyay ayaa yimid ciyaar ay 7-2 uga adkaadeen xulka Bulgaria, kulan ay qeyb ka ahaayeen xiddigo waa wayn sida Keisuke Honda, Shinji Kagawa, Shinji Okazaki iyo Maya Yoshida.
Takuma Asano ayaa sidoo kale la filayaa inuu qeyb ka noqdo xulka qarankiisa marka ay ka qeyb galayaan Rio Olympics ee ka dhici doona dalka Brazil.
Sidee u muuqaneysaa SHAXDA Arsenal marka lagu daro Asano?
Da’yarka reer Japan ayaa ka ciyaari kara weerarka wajiyadiisa kala gadisan sida, garbaha weerarka iyo No.10.
Liverpool oo soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Joel Matip….(Lambarkee loo dhiibay?)+SAWIRRO